Ukuhlaziywa kweSailor ngasogwini | Izincwadi Zamanje
Kule ncwadi I-Alberti Uhambisa ngamavesi akhe ukukhungatheka kokuba kude naye ISanta Maria Port. Endaweni yakhe entsha, imbongi ayikho eduze nolwandle, futhi lokho kuphazamisa imizwa yakhe, eba mpunga ngokunikezwa ibanga nomngane wakhe ulwandle.
Isimo sendawo esaziwa ngumbhali sikude kakhulu, futhi ngalelo banga izinkumbulo zakhe nesigaba sakhe sobuntwana okuyi ipharadesi elahlekile. Ngokuphambene nalokho, idolobha lembulwa njengendlwana yezimpunga, lapho isithukuthezi nesifiso kuyimizwa ebabayo enhliziyweni ka-Alberti olangazelela lokho akushiye ngemuva futhi ophoqeleka ukuzwa umunyu wohlobo lokudingiswa ukuthi kudla ngaphakathi.
Kulezi zinkondlo zokulangazelela ulwandle kuyinsakavukela ukugcinwa izakhi zasolwandle njengoba ukuhweba noma amagama ezobuchwepheshe nokukhanya nezithombe kudlala indima ebaluleke kakhulu. Ulwandle, oluyinto ethile yedolobha, luphathwa ngendlela ehambisanayo ngamamitha aphefumulelwe izinkondlo ezithandwayo lapho singabona khona ukufana, ukuphindaphinda, ukuzithiba kanye nenqwaba yezinqubo zendabuko ezisebenzela ukuveza isifiso ngendlela efanelekile isihloko.
Isithombe - I-labyrinth yombulali
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Ukuhlaziywa kafushane kwe- «Sailor on land»